ကိုလံဘတ်စ်သည်ဘွဲ့ရအကြီးတန်းမှပျော်ရွှင်သောနာရီအကြံပြုချက်များ - နှုန်းထားများ
ဘတ်ဂျက်အပေါ် Ballin ': တစ် ဦး ကဘွဲ့ရအကြီးတန်းရဲ့ထိပ်တန်းကိုလံဘတ်ပျော်ရွှင်နာရီအကြံပြုချက်များ
သငျသညျကိုလံဘတ်စ်၌နေ - သင်ပါပဲ သေပြီ ရေငတ်သည်။ သို့သော်သင်၏ခေါင်ဖျားအတွက်အသင့်အတင့်ရဆုံးနေရာဘယ်မှာလဲ။ ဒီမှာနောက်ဆုံးလေးနှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တီထွင်ခဲ့သောပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအကြံပြုချက်အချို့ကိုဒီမှာဖော်ပြထားသည်။
Lucky ရဲ့ကျောင်းဝင်းအပေါ်ပျော်ရွှင်နာရီ၏ရှငျဘုရငျဖွစျဖို့ရှိပါတယ်။ ထူးခြားသည်မှာ (ပွဲနေ့ မှလွဲ၍) (၇) နာရီမှ (၉) နာရီထိသောစနေနေ့များသည်တစ်ဒေါ်လာသာဖြစ်သည်။ သင်လိုချင်သည့်အရာသည်ခေါင်ခမ်းမျှသာဖြစ်သော်လည်းသင် Orloff ကိုမထွက်စေချင်သောအရက်များကိုသေချာစွာသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
ဒေါ်လာစျေးအပေးအယူတစ်ခုအားအကျိုးရှိရန်အလို့ငှာအတွင်းပိုင်းအကြံပေးချက်မှာဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရရန်နှင့်ပထမအကျော့တွင်သင်တတ်နိုင်သမျှမှာရန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလိုင်းများတော်တော်အရူးဖြစ်၏နှင့်အဘယ်သူမျှမသောက်ဘို့စောင့်ဆိုင်းမိနစ် 20 အဘို့အဆင်မပြေန်းကျင်ရပ်နေသည်ကိုကြိုက်။
သို့သော် Lucky သို့ဒေါ်လာစျေးဆန့်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာတစ်စုံတစ် ဦး ၏မိဘများနှင့်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောအလုပ်အကိုင်ရှိသူများ၊ ကောလိပ်ကျောင်းသားအချို့ကိုကောင်းမွန်သောအချိန်ကိုပြသရန်ကြိုးစားနေသူများသည် Lavar တွင်ကြီးမားသောကြီးမားသော baller ငွေများရှိလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တုန်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့အမေကဘီယာအမြောက်အမြားဝယ်ခဲ့တယ်၊ ဒါနဲ့ငါတို့ခါးပတ်ကွင်းကနေဆွဲကြိုးချလိုက်တယ်။ Natty မှလွဲ၍ အခြားအရာတစ်ခုခုကိုတတ်နိုင်သူများက Lucky သို့ရောက်သောအခါ၊ ထိုမီးခိုးရောင်ရထားကလေးပေါ်တွင်ခုန်ဆင်းပါ။
တိုတောင်းသောမြောက်ပိုင်းရှိအမြင့်စိန့်ပေါ်ရှိ Condados တွင်အကောင်းဆုံးအစားအစာရောင်းဝယ်မှုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ Happy Hour အတွင်း 4-7PM မှ tacos များသည်နှစ်ကောင်မျှသာဖြစ်ပြီး margs များမှာတစ်ဝက်သာဖြစ်သည်။ သငျသညျလုံးဝ6နှစ်များအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်နိုင်ပါတယ်နှင့်အစားအစာသည်ကြီးလှ၏။
မီနူးများကသင်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုအလိုရှိသည်ကိုညွှန်ပြသည့်အကွက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်တာကူများကိုအစဉ်လိုက်စီစဉ်နိုင်သည်။ ငါအရမ်းစပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုအထူးကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာတွေရှိတယ်။ ဒါ့အပြင်အရပျကိုအကြီးအ Vibe နှင့်ခေတ်မီလေထုရှိပါတယ်။
3. 4th လမ်း
4th သည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ကာရာအိုကေများအတွက်နေရာဖြစ်သည်။ ညနေ ၃ နာရီမှ ၉ မိနစ်အထိသူတို့သည်အချိုရည်အားလုံးကိုတစ်ဝက်လောက်သောက်သည်။
သင်ဟာငါနဲ့တူတူ၊ ကာရာအိုကေမှာ 'Ignition Remix' ကိုအနည်းငယ်တင်ချင်ရင် 4th သည်ကြီးတယ်။ သငျသညျမိုက်ကရိုဖုန်းထဲသို့အဖြူ - မိန်းကလေးကဲ့သို့အော်ဟစ်ကြဘူးသေချာအောင်, သေချာ DJ သမားကြောင်း sorta အရာမကြိုက်ဘူး။ ငါကဝူးမိန်းကလေးနည်းနည်းလေးပါဘဲ။
သင် Vogue filter ကိုဘယ်လိုရပါသလဲ
စတုတ္ထလမ်းသည်အလွန်အေးသောအပြင်ဘက်ရှိအအေးခန်းလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျ Summit St. ပတ်ပတ်လည်မှာနေထိုင်လျှင်, ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြုသကဲ့သို့, ဒီရုံသင်အကြိုက်ဆုံးအစက်အပြောက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
4. Out R ကိုအင်း
ကြာသပတေးနေ့မှ R အင်းသည်ကျောင်းဝင်း၏အပူဆုံးဘားဖြစ်သည်။ ၈ နာရီမပြည့်မီရေတွင်း၊ အိမ်တွင်းသုံးဒေါ်လာ ၅၀ တွင်းရှိ Cornhole၊ ရေကန်စားပွဲ၊ ပြင်ပဟင်းလင်းပြင်နှင့်ဘားများရှိသည်။
တစ်ဒေါ်လာနှင့် ၅၀ ဆင့်တို့သည်ရေတွင်းတစ်တွင်းအတွက်ကြီးမားသောသဘောတူညီမှုဖြစ်သည်။ Out R Inn တွင်ရှေ့ပိုင်းဟင်းလင်းပြင်တစ်ခု၊ အတွင်းပိုင်းအဆင့်နှစ်ခုနှင့်အပြင်ဘက်ရှိအပိုဆောင်းဘားတစ်ခုရှိသည်။ သင်တစ်ချိန်တည်းနှစ်ခါပြန်ရောနှောအချိုရည်စဉ်သင် cornhole သို့မဟုတ်ရေကူးကန်ကစားနိုင်ပါတယ်။
ကြည်လင်ပြတ်သားသောဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာတန်တန်ဘိုးတစ်ခုကိုယူလာပါ။ Out R Inn သည်တနင်္ဂနွေနေ့မှစတင်ထွက်ခွာရန်အလွန်ကောင်းသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး cranberry ဗော့ဒ်ကာကိုမှာယူရန်မကြောက်ကြနှင့်။
သင့်ရဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးအတွက် #tidalwave တစ်ခုမှာထားပါ၊ သူတို့ပြောတာကရယ်စရာပါ။ သူမ၏သူငယ်ချင်းများကို paparazzi ကဲ့သို့နောက်ကွယ်မှသတိပြုကြည့်ပါ။ ကျေးဇူးတင်စရာလူ ၉၈% သည်အားကစားကောင်းသည်။ #waitforit #tooslove #seniorceawl #threescomingsoon #asseenoncampus #myohioadventure #congratsgrads
Toos Spirits Under High (@toosunderhigh) မှမေလ ၂ ရက်၊ ညနေ ၁၂း၁၄ နာရီတွင်တင်ပြသော post ကို PDT ။
ငါအရမ်းရဲ့လက်အောက်တွင်အမြင့်ငါ့အကြိုက်ဆုံးဘားမဟုတ်ပါဘူး, ရိုးသားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကတခြားလူတိုင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်စနေနေ့များမှ ၇ ဒေါ်လာမှ ၉ ဒေါ်လာအထိသောက်သုံးမှုနှင့် ၉ ဒေါ်လာမှ ၉ အောင်စဒေါ်လာ ၃၂ အောင်စမူကြမ်းများရှိသည်။ မြေအောက်ဖြစ်ခြင်း Too ၏အေးမြ Vibe ပေးသည်နှင့်သူတို့အစဉ်အမြဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတရှိသည်။
#savetoos အကြောင်းလူတိုင်းသိကြပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျောင်းဝင်းရှိဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအသစ်များအတွက်နေရာရရန်ဘားသည်လက်ရှိနေရာတွင်ဆိုင်ပိတ်ရန်ရှိသည် (Red Bull Vodka schooner ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနှင့်) ။ တောက်ပသောဘက်တွင်၊ Threes Above High အနေနှင့်ဘားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ ဘားနှစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ထားသည့်ထပ်နေသည့်ကာလအနည်းငယ်ပင်ရှိနိုင်သည်။
အရမ်းရဲ့သမိုင်းတွေအများကြီးနှင့်အတူတစ် ဦး အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင် OSU ကိုသွားမယ်ဆိုရင်မင်းကလမ်းမကြီးအောက်မှာအနည်းဆုံးညအနည်းငယ်နေရမယ်။ ဒါ့အပြင် Too's မှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုဘားမှာလမ်းလျှောက်ပြီးနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်ပြီးစကားလုံးတစ်လုံးမှမပြောဘဲထွက်သွားပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်းရှိပါတယ်။
PS - ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက OSU Bar Deals အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖန်တီးလိုက်ပြီးကျောင်းဝန်းကျင်ရှိအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကိုကြည့်ရတာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းသည်။